Ososayensi bathola ukuthi ukuzila ukudla kubangela ukuzalwa kabusha kwamaseli - i-Afrikhepri Fondation
ULwesihlanu omnyama: Amaphromoshini
NgoLwesithathu, Disemba 2, 2020
Un izindlela eziningi zasendulo zezempilo zibonakalise ukuthi zisebenza ngezindlela eziningi. Ososayensi manje sebethole ubufakazi bokuqala bokungenelela kwemvelo obangela ukuvuselelwa kabusha kwamaseli wama-stem entweni noma ohlelweni.
Ucwaningo lushicilelwe kushicilelo lukaJuni 2014 lweCell Stem Cell ngabaphenyi base-University of Southern California. Ucwaningo lukhombisa ukuthi imijikelezo yokuzila isikhathi eside ivikela amasosha omzimba ekulimaleni futhi abangele ukuvuselelwa kwamasosha omzimba. Baphetha ngokuthi ukuzila ukudla kususa amangqamuzana asuka esimweni sokulala aye esimweni sokuzivuselela. (1)
Izilingo zomtholampilo zabantu zenziwe kusetshenziswa iziguli ezazikwi-chemotherapy. Isikhathi eside, iziguli bezingadli, okwehlise kakhulu isibalo samaseli amhlophe egazi. Kumagundane, imijikelezo yokuzila ukudla "isebenze imodi yokuzivuselela, iguqule izindlela zokusayina zamaseli we-hematopoietic stem, abhekele ukukhiqizwa kwegazi namasosha omzimba." (1)
Besingeke sibikezele ukuthi ukuzila ukudla isikhathi eside kuzoba nomphumela omangalisayo ekukhuthazeni ukuvuselelwa kwamaseli e-stem kohlelo lwe-hematopoietic. Uma ulambile, uhlelo luzama ukonga amandla, futhi enye yezinto engayenza ukonga amandla ukubuyisa amaseli amaningi omzimba angadingeki, ikakhulukazi lawo. lokho kungalimala. Esesiqale ukukubona kubantu nakumagundane ukuthi inani lamaseli amhlophe egazini lehla ngokuzila ukudla isikhathi eside. Bese kuthi uma uphinde wondla, amangqamuzana amhlophe egazi abuye. UValter Longo, umbhali ofanayo. (1)
Futhi, ngoba ukuzila ukudla kunciphisa kakhulu inani lamaseli amhlophe egazini, kubangela ukuvuselelwa kwamaseli amasha ama-stem kumasosha omzimba. Okubaluleke kakhulu, kwehlisa i-enzyme ye-PKA, exhunywe nokuguga, ukukhula kwesimila nomdlavuza. (1) Kubalulekile ukusho ukuthi ukuzila ukudla kuvikela ubuthi esivivinyweni somtholampilo lapho iziguli zizila khona amahora angama-72 ngaphambi kwamakhemikhali.
I-Chemotherapy ibangela ukulimala okubalulekile kwamasosha omzimba. Imiphumela yalolu cwaningo ibonisa ukuthi ukuzila ukudla kunganciphisa ezinye zezinto ezilimazayo ze-chemotherapy. Co-Umbhali uTanya Dorff (1)
Ukuzila ukudla kuyisiko ebeliyingxenye ebalulekile yamasiko amaningi asendulo, kusuka eVedic kuya eBuddhist nokunye, ukuzila ukudla akumele kudidaniswe nendlala. Kuyinqubo yokuzinqanda nokulawula imizwa yokudla ngasikhathi sinye uqiniseke ukuthi ukwenza kahle. Lapho ngizila ukudla ngivame ukwenza ukudla kwamanzi futhi bengikwenza lokhu cishe iminyaka eyisishiyagalombili manje futhi ngisazizwa ngijabule futhi nginamandla ngemuva kokukwenza.
Ukuzila ukudla kusiza ukuvikela izifo zobuchopho:
Abaphenyi eNational Institute of Aging eBaltimore bathole ubufakazi bokuthi ukuzila ukudla usuku olulodwa noma ezimbili ngesonto kungavimbela imiphumela yesifo i-Alzheimer's kanye neParkinson's disease. Ucwaningo luye lwathola nokuthi ukunciphisa ukudla nsuku zonke ngama-calories angama-500 ngosuku izinsuku ezimbili kwezingu-XNUMX kungakhombisa imiphumela ecacile ezuzisayo ebuchosheni.
Ukuzila ukudla kunciphisa ingozi yesifo senhliziyo nesifo sikashukela
Ukuba nosuku olujwayelekile ngaphandle kokudla kwehlisa ingozi yesifo senhliziyo nesifo sikashukela. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukuzila ukudla kukhipha ukwanda okukhulu kwehomoni yokukhula komuntu, ehlotshaniswa nokusheshisa imetabolism nokushisa amafutha. Ukushiswa kwamafutha kuyaziwa ukunciphisa ubungozi besifo senhliziyo nesifo sikashukela. Odokotela baqala nokubheka ukuzila ukudla njengokwelapha.
Ukuzila ngokuphumelelayo kuthatha umdlavuza emangqamuzaneni omuntu:
Ucwaningo oluvela kuScientific Journal of Aging luthole ukuthi iziguli ezinomdlavuza ezibandakanya ukuzila ukudla ekwelashweni kwazo zithole imiphumela emibi embalwa evela ekhemotherapy. Zonke izivivinyo ezenziwe kuze kube manje zibonisa ukuthi ukuzila ukudla kuthuthukisa ukusinda, kubambezela ukukhula kwesimila futhi kukhawulele ukusabalala kwezimila. INational Institute of Aging nayo ifunde ngohlobo lomdlavuza webele ngokuningiliziwe ukuqonda kangcono imiphumela yokuzila umdlavuza. Ukulandela ukuzila ukudla, amaseli omdlavuza azama ukwenza amaprotheni amasha futhi athatha ezinye izinyathelo ukuqhubeka nokukhula nokuhlukanisa. Ngenxa yalezi zinyathelo, ezabuye zaholela kwezinye izinyathelo eziningi, kwalimala ama-molecule wamahhala amakhulu adiliza i-DNA yamangqamuzana omdlavuza futhi abangela ukubhujiswa kwawo. Ukuzibulala kwamangqamuzana, iseli lomdlavuza lizama ukufaka zonke izinto ezingekho egazini elizidingayo ukuze liphile ngemuva kwesikhathi sokuzila, kepha alikwazi. Yena-ke, uzama ukuzidala futhi lokhu kuholela ekubhujisweni kwakhe.
Futhi, qiniseka ukwenza ucwaningo lwakho ngaphambi kokuzama lokhu. Ngiyethemba ukuthi lokhu kungakudlulisela phambili ukubheka lolu daba uma unentshisekelo yangempela.
Futhi uma siyeka ukudla okuncane, ngezikhathi ezithile
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 15,60
Thenga i- € 15,60
Umhlahlandlela Ophelele Wokuzila (Imihlahlandlela Esebenzayo)
Ukuzila ukudla: Indlela Yemvelo Yezempilo Nokuphila Isikhathi Eside
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 11,99
Thenga i- € 11,99
Ukuzila ukudla ekhaya: Umhlahlandlela osebenzayo wokwenza ikhambi elisheshayo noma elikhipha ubuthi emzimbeni
Okusha okungu-7 kusuka ku- € 9,91
Kusetshenziswe okungu-2 kusuka kuma-14,34 €
Thenga i- € 10,04
Ukuzila ukudla (Iseluleko sochwepheshe)
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 5,49
Thenga i- € 5,49
Ukuzila ukudla - Indlela yokuzila esebenza ngezikhathi ezithile ukunciphisa umzimba futhi uphile ...
Incwajana yokubhalela yokuzila
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 8,97
Thenga i- € 8,97
Ukuzila ukudla - Umgwaqo wasebukhosini oya empilweni yomzimba nengqondo
Okusha okungu-5 kusuka ku- € 25,00
Kusetshenziswe okungu-6 kusuka kuma-14,99 €
Thenga i- € 25,00
Ubuciko Bokushesha: Incwajana Yokuzila Ukuzila Buchinger
Okusha okungu-5 kusuka ku- € 24,50
Kusetshenziswe okungu-5 kusuka kuma-24,00 €
Thenga i- € 24,50
Ukuzila ukudla, ukwelashwa okusha?
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 17,99
Thenga i- € 17,99
Kugcine ukubuyekezwa ngoDisemba 1, 2020 2:21 am
SOURCE: STOP Lies
UDoumbi Fakoly, phakathi kukaNkulunkulu, okhokho kanye nesiko (Ividiyo)
U-Laurent Gbagbo noCharles Blé Goudé bahlulelwe yi-International Criminal Court
Buka Incwadi Ka-Eli (2010)